Ukuzalwa kwangaphambi kwesikhathi - lesi sihloko esifanele kakhulu ezinsukwini zethu, nakumama ozayo - kuyinto ejabulisayo kakhulu. Wonke umuntu wesifazane othola isimo sakhe esithakazelisayo akasishiyi umcabango wokuthi angaba nengane ngaphambi kwesikhathi. Ungazivikela kanjani wena nomntanakho? Ukwelashwa kokusongela kokubeletha ngaphambi kokuzalwa - konke lokho esizokutshela kulokhu kulesi sihloko.
Yini engcono kakhulu kunowesifazane okhulelwe? Lesi yisikhathi esithakazelisayo ekuphileni komuntu wonke ophupha ngomntwana. Yeka indlela okuthakazelisayo ngayo lapho ufunda ngokukhulelwa kwakho. Yingaleso sikhathi leso sivikelo sokuvikela siqala ukuthuthukisa kuwe. Impilo yakho ingaphansi kwezingane ezizayo. Kodwa ukuthi awukwazi, awuyikushiya umcabango wokuthi ungaba nesisu noma uzoba nokubeletha ngaphambi kwesikhathi. Uma ungakaze uzwe okuningi mayelana nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi kuze kube manje, sizokuzama ukuqeda lokhu kufundela. Konke okudingeka ukwazi mayelana nokubeletha okungakabiphi uzothola esihlokweni sethu.
Usongo lokubeletha ngaphambi kwesikhathi luyinto okuthi, lapho uqala ukubuka, ingathinta noma yimuphi owesifazane onempilo. Kodwa ukwesaba ukuthi ukubeletha ngaphambi kwesikhathi kungafika, kubalulekile ukucabangela izincomo zodokotela futhi uzivikele emiphumeleni enjalo. Into ebaluleke kakhulu akuyona ukukhathazeka. Ukuba nolwazi mayelana nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi, ungaziphatha ngokufanele ngesikhathi esiphuthumayo.
Ukubeletha kusukela ngesonto lama-28 lokukhulelwa isonto lama-37 lokukhulelwa kubizwa ngaphambi kwesikhathi.
Izimbangela zokubeletha ngaphambi kwesikhathi zingaba kanje:
ukutheleleka. Izifo zokuvuvukala zekhanda elimangalisa lesibeletho, umlomo wesibeletho kanye nesiswini yizici eziyinhloko ezibangela ukuphela kwesikhathi sokukhulelwa ngaphambi kokukhulelwa kanye nosongo langempela lokuthi uzoba nengane ngaphambi kwesikhathi. Kubaluleke kakhulu ukuhlolelwa ukutheleleka ngaphambi kokukhulelwa. Uma lokhu kungeke kwenzeke, khona-ke kusemibandela yayo yokuqala.
- ngenxa yengozi yokukhipha isisu noma ezinye zihlukana ezinzalweni eziyinkimbinkimbi, umlomo wesibeletho awukwazi ukugcina iqanda lokubeletha emgodini we-uterine.
- ukunqwaba kwesibeletho, isibonelo, ngokukhulelwa okuningi noma ama-polyhydramnios.
- I-Hyperandrogenia - isimo somfazi, lapho igazi lakhe linomthelela okwandisiwe wamahomoni wesilisa ocansini.
- izimo ezicindezelayo, ukuzikhandla ngokweqile, izifo ezithathelwanayo (i-ARVI, i-tonsillitis, i-pneumonia, njll).
Izimpawu zokuzalwa ngaphambi kwesikhathi:
Izimpawu eziyinhloko zokubeletha ngaphambi kokubeletha kukhona ubuhlungu obuphansi besisu kanye nomhlane ophansi, okungenzeka ube unomphela noma uqine. Uma i-excitability yesibeletho ikhuphuka, noma, ngokuphambene, imishini yokusebenza yezimvumelwano ze-fetus. Ukubonakala kwemfihlo yamangqamuzana kusuka emgqeni wokuzala kubonisa ukuzalwa okusoka kusengaphambili. Isibonakaliso esingenasimo esiyimingcele i-bouts njalo kanye nokuchitha kwamanzi. Ukuvela kwalezi zimpawu kudinga ukunakekelwa esibhedlela esibhedlela.
Ngaphambi kokuhlolwa kwedokotela kufanele basebenzise izidakamizwa zokwelapha (tincture of motherwort, valerian noma peony). Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa nezinye izinyathelo zokuvimbela okuhloswe ngazo ekunciphiseni umsebenzi wesivumelwano wesibeletho kuzokwenziwa.
Ukuvela kwengane ngaphambi kokuba kube yisivivinyo esinzima kumama wakhe, kodwa okokuqala. Izitho zakhe nezinhlelo zakhe azikakulungeli impilo entsha. Akuvamile ukuthi izingane zizalwa zilinganiselwa ngaphansi kuka-1000g, kulokhu, imizamo emikhulu iyadingeka ukuqinisekisa ukuthi umntwana osanda kusinda usinda.
Ingane engakazalwa iselula kakhulu kunomntwana ogcwele isikhathi eside, ngakho-ke ngesikhathi sokubeletha, ingathola ukuhlukunyezwa kokubeletha. Ukubeletha ngaphambi kokuqala kuholela ekusetshenzisweni kwe-anesthesia, i-fetus ihlolwe ngomqaphi wezinhliziyo, futhi izimali zenziwa ukuthi zilawulwe umsebenzi wokusebenza wesibeletho.
Ukubeletha kwangaphambi kokuqala kuyabakhathalela abesifazane abaningi ezweni lakithi. Into eyinhloko akukhona ukwesaba, kepha ukuzama ukuqapha impilo yakho ngaphambi kokukhulelwa. Phela, uma behola indlela efanele yokuphila, baqaphele impilo yabo, ngakho lokhu kuyimpumelelo yecala lecala. Uzozizwa uqiniseka ngokwengeziwe, ube sesikhundleni esithakazelisayo nesibalulekile kuwe nangesiqingatha sakho sesibili.
Indlela yokuphulukisa ama-hemorrhoids emva kokubeletha?
Ingabe indoda kufanele ibe khona lapho kuzalwa umkakhe?
Ukukhuthazwa kwemisebenzi, ukuphazamiseka kokuphazamiseka okuphazamisayo
I-Hypochondriasis: izindlela zabantu zokwelashwa
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokushesha ngamanzi
Ungayenza kanjani isimanga kumthandi wakho?
Kusho ngokumelene nobudala besifazane
Indlela yokudla okulungile nsuku zonke?
Ukulungiselela ingane ngaphambi kwesikole esikoleni
Umkami wokuqala kaDmitry Tarasov wanquma ukukhazimulisa umyeni wakhe wangaphambili
Kungenzeka yini ukwenza isisu sesibili
I-Cream-soup kusuka uju